Robert Lewandowski oo ku guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee IFFHS isagoo Ku Garaacay Lionel Messi iyo Jorginho | laacibfm.com
Home Laacib Robert Lewandowski oo ku guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee...
Robert Lewandowski oo ku guulaystay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee IFFHS isagoo Ku Garaacay Lionel Messi iyo Jorginho
Robert Lewandowski ayaa ku guuleystay abaalmarinta isagoo helay 150 cod. Lionel Messi ayaa kaalinta 2-aad ku jiray isaga oo helay 105 dhibcood halka xiddiga khadka dhexe ee kooxda chelsea ee Jorginho uu 110 dhibcood ka dambeeya Lewandowski oo kaalinta saddexaad ku jira.
Waxaa xusid mudan in Robert Lewandowski uu ku guuleystay abaalmarintaan sanadkii labaad oo xiriir ah. 33 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa ku guuleystay abaalmarinta sanadkii hore in kasta oo 2020 Ballon d’Or uusan dhicin sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19.
Robert Lewandowski ayaa xilli ciyaareed gaar ah 2020-21 u qaatay kooxda Bayern Munich. Weeraryahanka reer Poland ayaa dhaliyay 48 gool 40 kulan oo uu u saftay kooxda Bavarian xilli ciyaareedkii hore.
Goolasha Lewandowski ayaa Bayern Munich ku hogaamiyay hanashada horyaalkii 31-aad ee Bundesliga taariikhdooda. Bayern ayaa sidoo kale ku guuleysatay DFL-Supercup, UEFA Super Cup iyo FIFA Club World Cup xilli ciyaareedkii hore.
Robert Lewandowski ayaa labo xilli ciyaareed oo cajiib ah ku qaatay Bayern Munich. 33 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa durba dhaliyay 25 gool 19 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Previous articleManchester City oo xiriir la sameysay wakiilada Karim Benzema
Next articleShirka Jaraa’id ee Tuchel ka hor kulanka Manchester United, N’Golo Kante iyo Xidigaha kale ee ka maqan kulankan
Real Madrid oo ka fiirsaneysa inay dalab ka gudbiso garabka Napoli...
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Napoli ee Hirving Lozano ayaa lagu soo waramayaa in uu ku soo baxay bartilmaameed macquul ah oo ay...
Qabiirka Kubada Cagta Paul Merson oo Shaki galiyay Magacaabista Ralf Rangnick...
Diogo Dalot oo go’aansaday inuu u dagaalamo booska Manchester United’
Manchester United oo ku biirtay Dagaalka loogu jiro weeraryahanka Chelsea Timo...
Chelsea oo wadahadalo la furtay daafaca reer Hungary Attila Szala
Lionel Messi oo shaki laga qabo inuu taam u noqon karo...
Watford 1-2 Chelsea: Mason Mount iyo Hakim Ziyech oo guul ku...
Shaxda Rasmiga: Everton Vs Liverpool ee Horyaalka Premier League-ga, Liiska Xidigaha...